FAMPAHALALANA SY SARY MAHAZATRA MOMBA NY ALIKA POODLE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary mahazatra momba ny alika Poodle Dog
'Roa French Poodles, reny sy zanaka vavy - ilay eo an-tampony dia Chanel, ary izy no vavy. Ilay eo ambany dia ny reniny ary Tella no anarany. '
haben'ny fako antonony ho an'ny dihy mahafinaritra
Ny Standard Poodle dia alika antonony na lehibe. Rehefa nokolokoloina mba hampiseho ny fenitry ny alika ny vatana dia natao hanome endrika endrika toradroa. Mitovy halava ny halavany sy ny hahavony amin'ny malazo. Ny karan-doha dia boribory somary somary misy fijanonana voafaritra ihany. Manana vavony lava sy mahitsy izy io. Ny maso maizina sy miendrika boribory boribory somary mifanalavitra ary mainty na volontany. Ny sofina mihantona akaikin'ny loha ary lava sy fisaka. Samy mitovy amin'ny haben'ny alika ny tongony aloha sy ny tongony. Haavo ny topline. Ny rambony dia apetraka ary entina avo. Indraindray dia miantsona hatramin'ny antsasaky ny halavany na latsaka izy mba hahatonga ny alika ho mahay mandanjalanja kokoa. Mety hesorina ny demonia. Ny tongotra miendrika oval dia somary kely ary arifitra ny rantsan-tongotra. Ny palitao dia olioly na kofehy. Izy io dia miaraka amin'ny loko matevina rehetra, ao anatin'izany ny mainty, manga, volafotsy, volondavenona, fanosotra, apricot, mena, fotsy, volontany na cafe-au-lait. Na dia tsy manao ny fenitra fampisehoana an-tsoratra aza ny mpamboly sasany dia miompy Poodles miloko parti. Jereo ny fikolokoloana ireo karazana rakitsary Poodle.
Ny Standard Poodle dia miavonavona, be hatsaram-panahy, mendri-kaja, tsara toetra, mahafinaritra ary falifaly. Ity alika marani-tsaina ity dia iray amin'ireo karazany azo tsaboina indrindra. Ny sasany dia mety ho Ampiofanina mihaza. Ny Standard Poodle amin'ny ankapobeny dia angovo ambany ary matetika tony kokoa noho ny karazana Poodles kely kokoa, fa ho lasa strung avo raha tsy omenao ny habetsahana sy karazana fanatanjahan-tena mety . Mahatsapa ny feon'ny olona iray izy ary tsy hihaino raha mahatsapa fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy, na izany aza tsy hamaly tsara ny fifehezana henjana. Ny tompon-trano dia mila milamina, nefa manana rivotra voajanahary. Tsy ny karazan'alika no mipetraka any ivelany ao anaty vala, satria mahafinaritra azy ny miaraka amin'ireo tompony ary tsy tiany irery. Amin'ny ankapobeny dia sariaka amin'ny olon-tsy fantatra izy io, ary tsara ho an'ny ankizy. Ny Standard Poodle dia tsara amin'ny alika hafa. Ny sasany afaka manao alika mpiambina tsara. Hamarino tsara fa mafy orina ity alika ity, mpitarika fonosana matoky tena , manome isan'andro mandeha tongotra hialana fanahiana fisarahana sy ny hafa olan'ny fitondran-tena tsy ilaina .
Haavony: 15 santimetatra (38 cm) na mihoatra.
Milanja: Lehilahy 45 - 70 pounds (20 - 32 kg) Vehivavy 45 - 60 pounds (20 - 27 kg)
Ny haben'ny karazam-boankazo Poodle eken'ny AKC dia voafaritra amin'ny haavony fa tsy amin'ny lanjany. Ny Standard Poodle dia mihoatra ny 15 santimetatra amin'ny tendrony avo indrindra amin'ny soroka. Ny Poodles mahazatra izay 15 santimetatra na latsaka dia tsy afaka mifaninana amin'ny peratra fampisehoana AKC ho Standard Poodles.
Ny karazany lava velona, ​​Poodles, na izany aza, iharan'ny aretina génétique maro. Ny maso mihazakazaka, ny katarakta ary ny atrophy retina miandalana, izay mety hiteraka fahajambana. Ny aretin-koditra sy ny hoditra dia mahazatra, mety noho ny fampiasana tsy fahaizana clip na alergie amin'ny shampoo sy / na fanamafisana ny lokony. Matetika koa ny dysplasia sy ny aretin-tsofina. Mora voan'ny aretin'i Von Willebrand izy ireo. Brown Poodles dia mazàna lasa volondavenona aloha. Mora volo , noho izany fahendrena ny mamahana ny sakafonao kely 2-3 isan'andro, fa tsy iray lehibe.
Raha omena fanatanjahan-tena ampy dia tsy miasa ao anaty ny Standard Poodles. Tsy maninona izy ireo ao amin'ny trano iray raha toa ka zatra mihatra. Tokotany kely dia ampy.
Ny Standard Poodle dia mila raisina isan'andro MANDEHANA . Na dia mankafy rano sy tia mandeha an-tongotra aza izy ireo, dia tsy mitaky lavitra akory i Poodles raha mbola mandeha ny fanaovana fanatanjahan-tena, na izany aza, dia mitazona toe-tsaina tsara kokoa izy ireo ary ho tsara kokoa raha omena fotoana tsy tapaka hihazakazaka sy hilalao. ny fehy amin'ny faritra azo antoka. Ny Standard dia mitazona ny fanatanjahan-tena ara-panatanjahantena, manana tanjaka lehibe ary mila hetsika bebe kokoa noho ny karazany kely kokoa.
Manodidina ny 12-15 na mihoatra ny taona
Ankizy kely 3-8 eo ho eo
Ilaina ny fikolokoloana be raha toa ka aseho ilay alika. Ny paoma dia tsy maintsy soloana matetika ary hokapaina isaky ny enina ka hatramin'ny valo herinandro. Diovina ary zahao matetika ny sofina raha misy savoka na kongona na aretina ary esory ny volo maniry ao anaty lakandranon-tsofina. Mila mizana mizana matetika ny nify. Satria tsy raraka ny palitao dia tokony hokopahina. Misy karazany maro ny clip Poodle. Ny mahazatra indrindra ho an'ny tompona biby dia ny clip fikarakarana mora antsoina hoe 'pet clip,' 'puppy clip' na 'lamb clip', izay tapaka fohy ny palitao manerana ny vatana. Ny sarimihetsika malaza dia ny lasely anglisy sy ny clip Continental, izay aharatra ny antsasaky ny vatan'ny olona, ​​tavela manodidina ny kitrokely ny bracelet, ary tavela eo amin'ny rambony sy valahana ny pom-poms. Ny fenitra AKC dia mamela alika latsaky ny herintaona haseho amin'ny saribakoly alika fampisehoana izay manana fepetra manokana toy ny pom-pom amin'ny faran'ny rambony. Ny fomba fanaovana clip hafa dia ny clip kontinanta nohavaozina, clip an-tanàna sy ambanivohitra, clip kennel na utility, clip fahavaratra, ary clip Miami of bikini. Poodles nandatsaka kely tsy misy volo ary tsara ho an'ny marary allergy .
Ny Poodle dia fantatra manerana an'i Eropa Andrefana nandritra ny 400 taona farafahakeliny ary naseho tamin'ny sary hosodoko tamin'ny taonjato faha-15 sy ireo sary nalaina tamin'ny taonjato voalohany. Mampiady hevitra ny lohahevitra momba ny toerana namelarana ny alika tamin'ny fomba ofisialy ary tsy misy olona tena mahalala ny fiaviany marina. Frantsa dia nitaky ny niaviany, saingy ny AKC dia manome ny voninahitra an'i Alemana, izay nilazan'izy ireo fa alika mpamaky rano. Ny fanambarana hafa dia i Danemark, na Piedmont taloha. Ny azo antoka dia taranaky ny ankehitriny-lany tamingana Alika amin'ny rano frantsay, ny barety ary ny Hound Water Hungarian. Ny anarana hoe 'Poodle' dia azo inoana fa avy amin'ny teny alemaina 'Pudel,' izay midika hoe 'izay milalao anaty rano.' Ny 'Poodle clip' dia noforonin'ireo mpihaza mba hanampiana ny alika milomano tsara kokoa. Navelan'izy ireo hiaraka amin'ny volotara ny hatsiaka sy ny bararata maranitra. Ireo mpihaza any Alemana sy Frantsa dia nampiasa ny Poodle ho toy ny gundog ary ho toy ny vorona riandrano ary hamofona truffle mametraka ambanin'ny tany anaty ala. Nanomboka nampiasa ny karazany ny Frantsay ho mpanao dihy noho ny fahakingan'ilay alika sy ny fahaizany mampianatra. Nanjary nalaza be tany Frantsa io karazana io, izay nanjary anarana mahazatra 'French Poodle', fa ny frantsay kosa niantso ny anarana hoe 'Caniche', izay midika hoe 'alika gana. ” ny Kilalao SY Poodle kely ny karazany dia nalaina avy tamin'ny alika lehibe kokoa, ankehitriny fantatra amin'ny anarana hoe Poodles mahazatra . Tamin'ny taonjato faha-18 dia nanjary ankafizin'ny mpanjaka ny poodles kely kokoa. Ny habe ofisialy telo dia ny Toy, Miniature ary Standard Poodle. Heverina ho iray karazana izy ireo ary tsaraina amin'ny fenitra an-tsoratra ihany fa amin'ny habe hafa takiana. Ny mpiompy koa dia miteraka habe eo anelanelan'ny antsoina hoe a Klein Poodle (Medium Poodle) ary kely kokoa Teacup Poodle . Ny sasany amin'ireo talentan'i Poodle dia misy: retrie, mailaka, mpiambina, fankatoavana mifaninana ary fanaovana hafetsena.
Baily the black Standard Poodle amin'ny 8 taona
Baby Sarah the Standard Poodle amin'ny taona 1 - 'Sarah dia tsara tarehy manga sy volafotsy tsara tarehy Standard Poodle. Naseho izy ary tena feno ny tenany ary mieritreritra fa andriambavy. ' Sary natolotry ny Teampink Kennels
Baby Sarah the Standard Poodle tamin'ny taona 1, sary natolotr'i Teampink Kennels
Greta, fotsy fotsy efa lehibe efa lehibe
Bunker ilay Standard Poodle miloko parti amin'ny 11 taona— 'Bunker dia alika fitsaboana voamarina. Mitsidika trano fitaizana be antitra izy indraindray, fa any am-pianarana Kindergarten kosa ny ankamaroany mamaky miaraka amin'ireo ankizy. Tony sy mpankatò tokoa izy. '
Prince, fenitra lehibe Poodle efa lehibe
Poodle mahazatra fotsy fotsy
Sasha the Standard Poodle amin'ny maha alika azy amin'ny 16 herinandro
Merlin, 9 taona. Manana anaram-boninahitra amin'ny fankatoavana, Flyball ary fitsaboana izy.
'Ity no zanak'alikao Poodle Standard nilalao tamin'ny lanezy. Noraisiko tamin'ny andron'ny lanezy voalohany io. Tiany ny mihinana lanezy ary mihazakazaka ao. 15 herinandro izy ary efa milanja 30 lbs. Ankizy mahafinaritra sy milamina izy. '
'Mipetraka any Afrika atsimo aho ary manana tokotany lehibe. Tsy mbola tanora intsony aho ary nandray sy nanavotra Standard Poodles be dia be, izay manana olana maro. Heveriko fa, taorian'ny nijereko ilay Dog Whisperer fa ny fahombiazako tamin'ireo alika ireo dia izaho nandeha izy ireo, mety, fa tsy izy ireo nandeha tamiko . Ny habakabaka lehibe koa, ny faran'ny herinandro ary ny dobo filomanosana hampihena ny herin'izy ireo. Iray ihany no tsy tiako lomano. Samy nanatona ahy tamin'ny taona samy hafa izy rehetra. Amore amin'ny sary dia mety ho 7 na 8 taona. Mihisatra be izy ary miadana tsy mifoha indraindray. Sarotra inoana aorian'ny fahitana ny sary. Taloha izy bolt amin'ny alàlan'ny vavahady amin'ny hafainganam-pandehan'ny varatra, dia vita izany ankehitriny. Izy dia pro amin'ny kofehy ary nahazo ny fihetsika tony indrindra na dia ny alika rehetra aza mitolaka ato aminay. Izaho naka 2 taona hafa 8 volana ary mbola vitsy izy ireo !! Niharan'ny herisetra ara-tsakafo ny lahy. Hihinana ivelan'ny tanako izy izao ary zakako izao ny sakafony, fa miaraka amin'ny alika hafa kosa dia mbola tsy ampoiziny ihany izy. Amin'ny ririnina dia mikarakara toy ny alika fampisehoana izy ireo, fa rehefa fahavaratra dia milomano be isan'andro izy ireo. '
sisin-collie & Aostraliana mpiandry ondry Mix
Voavonjy Standard Poodles monina any Afrika Atsimo
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ny Standard Poodle
Sary mahazatra Poodle 1
Sary Poodle mahazatra 2
Sary Poodle mahazatra 3
Sary Poodle mahazatra 4
nanenjika sy Labrador retriever Mix
sarin'i yorkie chihuahua mix
mixer Golden Retriever boxer amidy